कोरोना रणसंग्राममा संघर्षपछिको मेरो अनुभव - पिम गुरुङ - Fonij Korea
कोरोना रणसंग्राममा संघर्षपछिको मेरो अनुभव – पिम गुरुङ
लेखक: फोनिज कोरिया संवादाता | प्रकाशीत मिति: June 2, 2021
आखिर जीवन प्रख्यात वैज्ञानिक चार्ल्स रोबर्ट डार्विनले भने जस्तै “बाँच्नका लागि संघर्ष” रहेछ । सारा विश्व आज यहि विषयमा सबैभन्दा बढि तल्लिन र भयभित छ । आधुनिक विश्वलाई कोरोना महामारीले ठूलो चुनौती दिईरहेको छ । यो लेख तयार गर्दासम्म यसले विश्वभरका १७ करोड २० लाख बढि मानिसलाई आफ्नो भयावह छालमा लपेटिसकेको छ । उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदा अपनाउँदै म सहित मेरो परिवार पनि यो महामारीबाट अछुतो रहन सकेनौँ ।
बैशाख तेस्रो साता एक साँझ मलाई एकैपटक ज्वरो र टाउको दुख्ने समस्या देखा प¥यो । रातीको समय भएकाले तत्काल पिसिआर परीक्षण गराईहाल्ने अवस्था थिएन । त्यसैले स्वास्थ्य समस्या कम गर्न सिटामोल खाएँ । परिवारमा म बाहेक ७ महिने छोरासहित अरु ५ जना पनि भएकाले सुरक्षा सतर्कताका लागि मास्क लगाएँ । छुट्टै बिस्तरा लगाएर सुतेँ । भोलिपल्ट बिहान टिचिङ हस्पिटलमा पीसिआर परीक्षणका लागि स्वाव दिएँ । टिचिङका कर्मचारीले कोरोना पोजिटिभ देखिए हस्पिटलको ल्याब यूनिटबाट फोन कल या मेसेज आउने बताएका थिए । तर स्वाव दिएको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि कुनै कल वा मेसेज आएन । यसरि कुनै कल वा मेसेज नआईसकेपछि मलाई कोरोना संक्रमण भएको रहेनछ भनेर ढुक्क भएँ । तर फेरी अर्को मनले सोचेँ “सरकारी हस्पिटलको कुनै भर छैन, एकपटक हस्पिटलमै पुगेर बुझ्नुपर्छ ।”
अर्कोदिन हस्पिटल पुगि रिपोर्ट बुझेर हेर्दा पो नराम्ररी झस्किएँ । रिपोर्ट पोजिटिभ आएको रहेछ । “रिपोर्ट पोजिटिभ देखिए फोन कल या मेसेज आउछ भनेको होईन” भनेर त्यहाँका कर्मचारीलाई सोधेँ । “मेसेज आउन २४ घण्टादेखि ७२ घण्टासम्म पनि लाग्न सक्छ । त्यो पनि कसैलाई आउँछ, कसैलाई आउँदैन ।” कर्मचारीबाट यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण उत्तर आयो । २४ घण्टा त के २४ दिन बितिसक्दा पनि त्यसबारे कुनै जानकारी आएको छैन । रिपोर्ट त बुझियो, कोरोना संक्रमण भएको पनि निर्क्यौल भयो । तर अब के गर्ने, कसो गर्ने ? दिमागले केही सोच्न सकेन । एकछिन हस्पिटलकै डिलमा बसेर घोत्लिएँ । र एकछिनपछि फिभर क्लिनिकमा गएर स्वास्थ्य जाँच गर्ने निधो गरेँ । तर विडम्वना ! मुलुककै सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा फिभर क्लिनिक नै रहेनछ ।
कोरोना ईमर्जेन्सी यूनीटमा गएर पालो कुरेर बसेँ । त्यहाँको दृश्य देखेर बिचलित भएँ, आत्तिएँ । हस्पिटलको गेटैदेखि कोरोनाका गम्भिर बिरामीसहितका एम्बुलेन्स लस्करै रोकिएका छन् । बिरामी ओराल्दै गरेको ट्याक्सीको संख्या पनि कम छैनन् । हस्पिटलको प्यासेज बिरामीले भरिभराउ छन् । कोही भुँईमा त कोही स्ट्रेचरमा पल्टिरहेका छन् । कोही बिरामी अक्सिजनको साहारामा सास लिदैँ छन्, कोही विना अक्सिजन अहिले नै सासै तोडिदिन्छन् कि जस्तो गरि दु्रतत्तर गतिको सास लिईरहेका छन् । विरामीका आफन्तहरु भर्ना लिईदिनका लागि त्यहाँका नर्स र डाक्टरसँग अनुनय विनय गरिरहेका छन् । “जति नै सिरियस केस भएपनि भर्ना लिन सक्दैनौँ, बेड नै छैन” उताबाट डाक्टर चर्को स्वरमा चिच्याउँदै छन् । बिरामीका आफन्तहरु अति निराश र हतास मुद्रामा छन् । तैपनि भर्ना पाईने आशमा ३५ देखि ४० जना गम्भिर बिरामी र तिनका आफन्तहरु ईमर्जेन्सी युनिटको ढोका तर्फ नियालीरहेका छन् ।
एकछिनपछि ईमेर्जेन्सि युनिटको ढोकामा अर्को डाक्टर देखा पर्छन्, र भन्दैछन् “दुई वटा बेड खाली हुँदैछ, तपाइ अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ भने भर्ना लिन्छौँ, नत्र भर्ना लिन सक्दैनौँ ।” थाहा छैन आज कसको भाग्य बलियो छ । बिरामीका आफन्तहरु अत्तालिदैँ फोन घुमाउँदैछन् । कोही बेड पाउने आशमा एम्बुलेन्स लिएर अर्को हस्पिटल दौडिएका छन् । कोही बिरामी भने सोही हस्पिटलमा बेड पाउने आशामा एम्बुलेन्समै लम्पसार सुतिरहेका छन् । यी सबै दृश्यले मन अमिलो बनायो । मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली देखेर आक्रोश पैदा भयो । भोली केही गरि मेरो पनि स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर भयो भने ? यो प्रश्नले निकै पिरोल्यो ।
करिब १ घण्टाको पर्खाईपछि मेरो स्वास्थ्य जाँचको पालो आयो । डाक्टरले एक्स–रे गर्न सुझाए । त्यतिबेलासम्म बेलुकाको पौने पाँच बजिसकेको थियो । एक्स–रेको लागि ल्याबमा पुग्दा कर्मचारी नै छैनन् । ती कर्मचारी ६ बजे मात्रै आउने कुरा अन्य कर्मचारीबाट थाहा पाईयो । मेरो अवस्था सामान्य नै भएकाले १ घण्टा कुर्न खासै समस्याको कुरा थिएन । तर त्यहाँ गम्भिर बिरामीहरु पनि थिए जसको तत्कालै औषधी उपचार सुरु गर्न एक्स–रे रिपोर्टको खाँचो थियो । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो हस्पिटलको कोरोना ईमेर्जेन्सि यूनिटमा खटिएका कर्मचारी कसरि यति गैरजिम्मेवार बन्न सक्छन् ? यो देखेर अचम्मित भएँ । सवा ६ बजेतिर ती कर्मचारी हस्पिटल प्रवेश गरे । पीपीई सेट लगाएर एक्स–रे ल्याबमा छिर्न अर्को १५ मिनेट समय लाग्यो । बल्लतल्ल एक्स–रे भयो । फोेक्सोमा निमोनियाको संक्रमण भईसकेको रहेछ । तर डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको डाक्टरले बताए र ७ थरि औषधी प्रेस्क्राईब गरे । फार्मेसीमा औषधी किनेँ र डेरा फर्किएँ ।
भोलिपल्ट परिवारका अरु सबैजनाको पीसिआर परीक्षण भयो । बेलुका रिपोर्ट आयो । मसहित ४ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टी भयो । ७ महिने छोरा र उनको आमाको भने रिपोर्ट नेगिटिभ आयो । यो कुराले खुशी तुल्यायो तर ६७ वर्षीय बृद्धा हजुरआमालाई संक्रमण भएको कुराले भने कता कता डर पैदा गरायो । तर अब कोरोनासँग भिड्नु त थियो । छोरा र जीवनसंगनीलाई अन्तै बसोबासको व्यवस्था मिलाईयो । अब डेरामा हामी ४ जना संक्रमित मात्रै भयौँ । हामी ४ जना ४ फरक कोठामा बस्न थाल्यौँ । चौबिसै घण्टा मास्क लगायौँ । पौष्टिक आहार सहितको खानपानमा जोड दियौँ । विशेष गरि झोलिलो खानेकुरा खान थाल्यौँ । दोश्रो दिनमै ज्वोरो र टाउको दुख्ने समस्या कम भयो । सुख्खा खोकी भने सबैलाई थियो । अरु स्वास्थ्य समस्याहरु भने थिएनन् ।
पाचौँ दिनदेखि भने मैले कमजोर महसुस गर्न थालेँ । गन्ध र स्वाद पूर्ण रुपमा हरायो । चक्कर लाग्ने, सास बढ्ने र छाती दुख्ने जस्ता समस्या देखिन थाले । स्वास्थ्य जाँच गराउँदा अवस्था सामान्य नै रहेको डाक्टरले बताए । तर स्वास्थ्यमा कुनै सुधार आएन बरु समस्या अझ बढ्दै गएको महसुस हुन थाल्यो । यो बिचमा स्वासप्रश्वासलाई टेवा पुग्ने योगाहरुको अभ्यास गर्न थालेँ । प्रोनिङ पोजिसनमा सुत्दा सास फेर्न सहज भएको महसुस हुन्थ्यो ।
यहि बेला देशमा कोरोना महामारीले भयावह रुप लिईरहेको थियो । दैनिक ९ हजार बढि नयाँ संक्रमित थपिईरहेको थियो । २ सय भन्दा बढिको दैनिक मृत्यु भैरहेको थियो । अस्पतालमा वेडको अभाव थियो । जताततै अक्सिजनको हाहाकार थियो । एक बुंद अक्सिजनका लागि मानिसहरु तड्पिरहेको अवस्था थियो । कयौँले अक्सिजन अभावकै कारणले ज्यान गुमाईरहेका थिए । विभिन्न अस्पतालले उपचाररत विरामीको थप उपचार गर्न नसक्ने भन्दै विज्ञप्ती नै निकालेका थिए । कतै लोडसेडिङका कारण अक्सिजन सप्लाई रोकिदा बिरामीहरुले दर्दनाक मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो । सञ्चारमाध्यममा यी र यस्तै भयावह र कारुणिक विषयवस्तुहरु तारन्तर आईरहेका थिए । यसले कतै न कतै मलाई पनि मानसिक रुपमा असर त गरिरहेकै थियो ।
दशौँ दिन पुगेपछि त शरिरमा अक्सिजनको लेवल पनि कम हुदै गयो । उभिन पनि मुस्किल हुने अवस्था आयो । दुई पाईला सार्दा मात्रै पनि सास बढिहाल्थ्यो । र शरिरको तापक्रमले १०२ डिग्री हान्यो । तत्कालै नजिकैको एक नीजि अस्पताल पुगेँ । डाक्टरले कुनै स्वास्थ्य जाँच नै नगरि भर्ना हुन सुझाए । तर अस्पतालमा बेड खाली नरहेको बताए । उनले पीसिआर परीक्षण गरेर रिपोर्ट नेगेटिभ आए जनरल वेडमा भर्ना गर्न सकिने विकल्प औँल्याए । तर यति धेरै स्वास्थ्य जटिलताहरु भएकाले म कोरोना संक्रमणमुक्त भइनसकेको कुरामा विश्वस्त थिएँ । र सो अस्पताललाई छाडेर तत्कालै अर्को एक नीजि हस्पिटल पुगेँ ।
दोश्रो अस्पतालमा मेरो सबै स्वास्थ्य जाँचहरु भयो । त्यसबेला अक्सिजन लेवल ९० मा झरेको थियो । एक्सरेको रिपोर्ट आयो । फोक्सोको संक्रमण अझै कम नभएको भएपनि अस्पताल भर्ना नै र्भइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको डाक्टरले जानकारी दिए । यद्यपी मैले स्वेच्छाले भर्ना हुने भए भर्ना लिन सकिने डाक्टरको भनाई थियो । त्यसबेलाको स्वास्थ्य अवस्था अनुसार त भर्ना हुनु नै मेरा लागि उत्तम विकल्प थियो । तर परिवारका सबैजना संक्रमित छन्, कुरुवा बसिदिने को त ? डाक्टरले एण्टिवायोटिक सहित अरु केहि औषधीहरु थपेर घर पठाए । डाक्टरको सुझाव अनुसार भरपुर आराम, सहि समयमा औषधी सेवन र पौष्टिक आहारसहितको खानपानमा विशेष ध्यान दिन थालेपछि स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आउन थाल्यो ।
१७औँ दिन पुगेपछि फेरी पीसिआर परीक्षण गरियो, टिचिङ हस्पिटलमै । यसपाली भने स्वाव दिएकै दिन बेलुका रिपोर्टबारे मोबाईलमा मेसेज आयो । म र बहिनी कुसुमको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको रहेछ । तर हजुरआमा र कान्छा मामाको पोजिटिभ आयो । उहाँहरुलाई कोरोनाका कुनै लक्षण वा स्वास्थ्य समस्या नै थिएन र आज पनि छैन । बरु मलाई सामान्य खोकी अझै पनि छ । त्यसको लागि घरेलु उपचार विधि अपनाईरहेको छु । टिचिङ हस्पिटल, टेकु हस्पिटल र हामीले नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउँदै आएको चिकित्सकको एउटै राय छ कि, आसोलेसनमा बसेको १४ दिन पछाडी कुनै लक्षण वा स्वास्थ्य समस्याहरु नभए पीसीआर परीक्षण गरिरहनु पदैन । यदि परीक्षण गरिहालेको अवस्थामा यदि रिपोर्ट पोजिटिभ आएको भएपनि थप आईसाोलेसनमा बस्नु पर्दैैन । त्यस्ता संक्रमितहरुबाट रोग सर्ने सम्भावना पनि नहुने रहेछ । यदि संक्रमितको शरिरमा मरेका भाइरस यथावत रहेको अवस्थामा पीसिआर परीक्षणका क्रममा रिपोर्ट पोजिटिभ आउने रहेछ । पीसिआर परीक्षणले भाईरस सक्रिय छ या निष्क्रिय छ भन्ने कुरा नछुट्याउने रहेछ । तथापी तथ्यले जे भने पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आईसकेपछि केही समयलाई आसोलेट भएर बसौँ भन्ने हाम्रो आपसी समझदारी अनुरुप उहाँहरु आईसोलेसनमा हुनुहुन्छ । आज हामीलाई कोरोना संक्रमणको पुष्टी भएको २७औँ दिन पुरा भईसकेको छ । र सबैजनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ ।
जब हामीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टी भयो, सबैभन्दा बढि हजुरआमाको लागि चिन्तित थियौँ । केही समय अघि मात्रै उहाँको पेटको ठूलो सर्जरी भएको थियो र उपचारको क्रम अझै जारी छ । तर संक्रमणको सुरुवाती दुई दिन सामान्य ज्वरो बाहेक उहाँमा कुनै स्वास्थ्य जटिलता देखिएनन् । यो कुराले हामी ज्यादै हर्षित सँगै अचम्मित पनि भयौँ । बरु हामीलाई निमोनियाको संक्रमण भयो । तर अहिले सबै ठीक भैसकेको छ ।
हामी दाजु बहिनी कोरोना संक्रमणमुक्त भएको ५ दिनपछि श्रीमति र छोरालाई डेरामा बोलायौँ । त्यसअघि पुरै फ्ल्याट सफा ग¥यौँ । दोहो¥याई तेह¥याई सबैतिर डिसईन्फेक्सन स्प्रे छर्कियौँ । ३ हप्तापछि हाम्रो पुनर्मिलन भयो । यी सबै कष्टप्रद झमेलामा पर्नुअघि बल्लबल्ल पेट घिसार्दै बामे सर्न थालेको छोरो ३ हप्तापछि फर्किदा हातगोडा टेकेर एकछिनमै सबै कोठा चाहार्ने भैसकेछ । डेरा फर्किएको भोलिपल्टै कतै आड पाए सहजै उभिन पो थाल्यो । र अहिले छोरो भित्ता समाउँदै २/३ पाईला सार्न सक्नेसम्म भईसकेको छ । सर्सती सुन्दा यी कुरा सामान्य हुन तर यो यस खालको विषम परिस्थितीमा खुशी हुने र मन भुलाउने अद्भुत बाटो रहेछ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव मेरो स्वास्थ्य सुधारमा परेको अनुभुती गरेँ । उनको आगमनले कोरोनाले गलाएको कमजोर र शिथिल शरीरमा उर्जा थपिएको महसुस गरेको छु ।
कोरोना संक्रमणमुक्त भईसकेपछि म पहिलेभन्दा कयौँ गुणा थप सचेत र सतर्क हुन थालेको छु । खासगरि दुधे बच्चाको सुरक्षाको लागि भएपनि यस विषयमा गम्भीर बन्न उत्प्रेरित गरेको छ । चार पाँच दिनको फरकमा अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि पूर्ण सुरक्षा सावधानी सहित बजार निस्कने गरेको छु । बजारबाट फर्किएपछि सबै सामानलाई घर बाहिरै स्यानिटाईज गरेपछि मात्रै भित्र्याउने गरिएको छ । सँगै म स्वंयले घर बाहिर रहेको बाथरुममा नुहाईधुवाई गरेपछि र बजार निस्कदा लगाएका सबै लुगा धोईपखालेपछि मात्रै भित्र छिर्ने गरेको छु । भर्खरै कोरोना संक्रमण मुक्त भएकाले र सर-सामान खरिदका लागि बजार आवतजावत गरिरहनुपर्ने भएको कारणले फेरी पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम अझैपनि उत्तिकै छ । यस कुरालाई विशेष रुपले ख्याल गर्दै घरभित्र पनि सबैजनाले मास्क लगाउने गरेका छौँ । र म छुट्टै बिस्तरामा सुत्ने गरेको छु । भनिन्छ नि, “प्रिभेन्सन ईज बेटर देन क्युअर् ।” अब फेरी संक्रमण नहोस् भन्नेमा हामी सबैजना सचेत छौँ ।
कोरोना आफैँलाई नलाग्दासम्म सामान्य लाग्न सक्छ तर जसलाई लाग्छ, उसैलाई थाहा हुन्छ कोरोनाको पीडा । कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरु देखिए तत्कालै परीक्षण गराऔँ । रोग लुकाएर बसे समस्या गम्भीर बन्न सक्छ । पहिलो कुरा त संक्रमण हुनै नदिन सावधानी अपनाऔँ । मास्कमा प्राण छ, यस्लाई कहिल्यै नछोडौँ । सेनिटाईजर हाम्रो पहरेदार हो, साथैमा राखौँ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट कोरोना विरुद्धको अभियानमा सहयोग गरौँ । सामुहिक प्रयासबाट सबै कुरा हाँसिल गर्न सम्भव छ । धैर्य गरौँ, एक दिन सुनौलो बिहानीको सुरुवात हुनेछ ।